Mafomu ekuremekedza: Usanetseka!
Nyora tsamba, chinyorwa kana tsamba nyanzvi inoda kutevedzera mamwe macode ekudzidzira. Matauriro ane ruremekedzo chikamu chinokosha cheizvi. Kunyangwe iri email yehunyanzvi, vanofanirwa kukosheswa. Kuregeredza kana kufuratira aya macode kunogona kukanganisa hukama hwako hwehunyanzvi.
Gamuchira kwaziso kana kuti kutaura kwokukwazisa: Bumbiro remitemo retsika rinotii?
Hazvisi zvisizvo kuwana pamagumo etsamba kana e-mail nyanzvi, chimiro chekuremekedza: "Ndapota gamuchirai kutaura kwekunaka kwangu". Kunyangwe zvakapararira, igadziriso ine zvikanganiso uye zvinosuruvarisa kuti inogona kukanganisa maonero ehunyanzvi kana kugona kweanotumira email.
Izwi rechiito rekubvumidza rinopindura kune mimwe mitemo iyo iyo panache yemazwi ane chekuita nemhando yemafomula asina kunaka nguva dzose. Kubvumirana, kune chokwadi cheLatin mavambo "Gratum" zvinoreva "Zvinofadza kana kugamuchirwa". Kazhinji, chiito ichi chinobvuma zvinopindirana zvine chekuita nekutaura kana inishuwarenzi.
Naizvozvo, mutsara weruremekedzo wekuti "Ndapota gamuchirai kutaura kweruremekedzo rwangu", "Ndapota gamuchirai kutaura kweruremekedzo rwangu" kana kunyange "Ndapota gamuchirai vimbiso yekufunga kwangu" ndeyechokwadi.
Kune rumwe rutivi, uyu haana kururama: "Ndapota gamuchirai kutaura kwekunaka kwangu". Chikonzero chiri pachena. Tinogona chete kutamisa kutaura kwemanzwiro kana maitiro akadai seruremekedzo kana rukudzo. Pakupedzisira, tinogona kungoti: "Gamuchira kukwazisa kwangu".
Mutsara wakapfava pakupera kweemail "Ndokumbira ugamuchire kutaura kweruremekedzo rwangu" saka hauite.
VERENGA Ita Voltaire Project Inokuendesa Kumhanzi Yakakurumbira yeOrgraph
Kukwazisa kana manzwiro: Tsika dzinoti kudii?
Tinowanzosangana nematauriro eruremekedzo akadai sekuti: “Gamuchirai, VaPresident, kutaura kwemanzwiro angu akazvipira” kana kuti “Ndapota gamuchirai, Changamire, kutaura kwemanzwiro angu akasiyana”.
Aya matauriro okuremekedza akarurama chose. Zvechokwadi, maererano nekushandiswa kunozivikanwa nemutauro wechiFrench, munhu anotaura manzwiro uye kwete kukwazisa.
Aya ma nuances maviri aitwa, hapana chinodzivirira kusarudza pane mapfupi ane hunhu mafomula. Izvi ndizvo zvakare zvinokodzera maemail ehunyanzvi, kukosha kwayo kunotendwa nekumhanya kwavo.
Zvichienderana neunogamuchira, iwe unogona saka kusarudza fomura ine hunhu senge: "Zvakanaka zvangu", "Kwaziwai zvangu", "Kwaziwai zvangu", "Kuvimbika", "Kwakanaka", nezvimwe.
Zvakadaro, ziva kuti email yehunyanzvi haigone kugamuchira zviperengo kana girama kukanganisa. Izvi zvinogona kukanganisa chimiro chako kana chebhizinesi rako.
Pamusoro pezvo, zvipfupiso zve "Cdt" zveushamwari kana "BAV" zvakakunakira iwe, hazvikurudzirwe, kunyangwe mumamiriro ezvinhu apo iwe unogovana dhigirii rimwe chete muhutungamiriri nemunyori wako.
Ziva makodhi ekushandisa mumamiriro ehunyanzvi January 5th, 2022Tranquillus
pashureIwo anowanzo kanganisa mubhizinesi email
zvinoteveraPersonal kudzidziswa account (CPF): ziva kodzero dzako